Dr. Tint Swe's Writings: Food Myths အစားအစာမှာ အထင်မှားနေတာတွေ
၁။ ဆရာရှင့် ကလေးမီးဖွားပြီးတာ ၂၅ရက်ရှိပါပြီ။ ဆရာဝန်က အစားသောက် အကုန်စားပါ။ မရှောင်ရဘူးပြောလို့ စားပါတယ်ရှင်။ မိခင်ကအစားရှောင် မကောင်းဘူးဆိုလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ခင်ပွန်းသည်က သူ့အိမ်ကပြောတဲ့ အရပ်စကားတွေ နားဝင်ပြီး ကျွန်မအစားမရှောင်တာကို မကြိုက်ပါဘူး။ သူ့အိမ်ကပြောသလိုဆို ကျွန်မမှာ ထမင်းဖြူနဲ့အသားကျော်သာ စားရမယ့်ပုံရှိနေပါတယ်။ ခု သမီးလေးက ချွဲရှိနေတော့ ပိုဆိုးပါတယ်။ ကျွန်မ မဆင်ခြင်လို့ပဲဆိုပြီး ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိခင်အစားရှောင်တာမကောင်းဘူးဆိုတာကို ဆရာရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါရှိ တင်ပေးစေလိုပါတယ်ရှင်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။
မနက်က ကိုယ်ဝန်အတွက်စာ။ အခု ကလေးအမေအတွက်။ ချွဲဆိုတာ အသက်ရှူလမ်းကနေဖြစ်စေတယ်။ ပါးစပ်ကနေဝင်တဲ့ အစားအသောက်ကြောင့် မဖြစ်စေပါ။
၁။ သမီးက အသက်၂၄ပါ။ အရင်တုန်းက ငရုပ်သီး အရမ်းစားပါတယ်။ အစာအိမ်တွေအောင့်ပြီးနာပါတယ်။ အဲ့တုန်းက နောက်ပိုင်းတော့ ငရုပ်သီးကိုစားတာ ရပ်လိုက်ပါတယ်။ အခုက အစာအိမ် ပြန်အောင့်နေတာ ၂ရက် ရှိပါပြီ။ နှစ်စကတည်းက ဝိတ်ချနေတာကြောင့် ညစာကို မစားပါဘူး။ ဝိတ်က 54 kg ပါ အရင်က 60 ကျော်ပါတယ်။ သမီးက တနေ့ကို ၂နပ် ပုံမှန်စားဖြစ်အောင်စားပါတယ်။ တခါတလေ မနက်ကိုနေ့လည်စာနဲ့ ပေါင်းစားဖြစ်ပါတယ်.. အခု အစာအိမ် အောင့်နေတာ အိမ်တွင်းဆေးနည်းလေး နဲ့ သက်သာတဲ့နည်းလေး သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ဟို ကြီးကြီးမားမား ရောဂါတွေ ဖြစ်တာတော့ မရှိထားပါဘူး။ မေးတာတွေ အမှားပါရင် တောင်းပန်ပါတယ်ဆရာ။ သမီး ပထမဦးဆုံး မေးတဲ့အတွက် အမှားပါခဲ့ရင် ခွင့်လွတ်ပါဆရာ။
အိမ်တွင်းဆေးနည်း မသိပါ။ ဆောရီး။
၂။ ဆရာ ကျွန်မရောဂါက အစာမာမာစားရင်၊ ညနေစာ အများကြီး နေ့တိုင်းဆက်တိုက်စားရင် ဗိုက်ကနေ ရင်ဘတ်အထိ၊ ခါးကနေ လက်ပျဉ်အထိ တောင့်နေပြီး ကျောအောင့်ပါတယ်။ အစာအိမ်ထဲကို မှန်ပြောင်းကြည့်ပြီးတဲ့နောက် chronic gastritis လို့ မှတ်ချက်ရေးထားပါတယ်။ အခု ဆရာဝန်က Motilium-M, Esomeprazole, Unienzyme တလခွဲ သောက်ခိုင်းထားပါတယ်။ စားလို့ကောင်းနေပါတယ်။ ညနေစာ ထမင်းကိုတော့ ဝအောင်မစားရဲလို့ နည်းနည်းပဲ စားပါတယ်။ ကျွန်မ ရောဂါက အစာခြေရာမှာ catalyze လုပ်ပေးတဲ့ Enzyme deficiency ကြောင့်လား။ ဒီရောဂါ ပြန်မဖြစ်အောင် Unienzyme ကိုအမြဲသောက်သင့်သလား။ side effect ကဘာဖြစ်နိုင်လဲ။ ဒီဆေးကို အစာစားပြီး တစ်နာရီကြာမှ သောက်ရတယ်လို့ သူငယ်ချင်းကပြောတယ်။ ဟုတ်ပါသလား။ ဆရာဝန်ကတော့ အစာစားပြီးသောက်လို့ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီက ဆရာဝန်တွေက လူနာသိချင်မေးပြီး အေးအေးဆေးဆေး ဆွေးနွေးဖို့ အချိန်မပေးလို့ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးပါဆရာ။
အင်ဇိုင်းဆိုတာ အစာကျေချက်ပေးတယ်။ လူတိုင်းမှာလဲ အလိုလိုထွက်နေတယ်။ အစာစားပြီးပြီးချင်းသောက်ရမယ်။ ဒါမှ ဆေးနဲ့အစာတွေ့ကြမှာ။ ကြာရှည်မသောက်ရပါ။ တာရှည်သောက်နေရင် ကိုယ်ကနေထွက်တာနည်းနည်းလာမယ်။ သဘာဝအင်ဇိုင်းက ပုံမှန်ရှိနေမှသာကောင်းတယ်။ ဆရာဝန်အတော်များများက အဲလိုဘဲ။ ဆောရီး။
3. Chewing gum Bubblegum (ချူးယင်း-ဂမ်း) (ဘာဘယ်လ်-ဂမ်း) တွေကို အစာချက်ရတာ အချိန်ကြာတယ် ဆိုတာ မဟုတ်ပါ။ ဒီလိုဝါးနေတာတွေကို မျိုချလိုက်ရင် အစာအိမ်၊ အစာလမ်းထဲမှာ ကြာကြာနေပြီး နောက်မှာ ကျေချက်သွားမယ်လို့ ထင်တာ မှားပါတယ်။ ပါးစပ်ကနေ တဖြေးဖြေး အောက်ဆင်းဆင်းလာပြီး နောက်ဆုံး ဝမ်းထဲမှာသာ ပါသွားပါမယ်။ အစာချက်သလို ချက်မရပါ။
လူကြီးတွေ ဝမ်းချုပ်ချင် ချုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အသက်ကိုတော့ လွဲမချပါနဲ့။ အသက်ကြီးလို့ ရောဂါတွေကုဘို့၊ ကာကွယ်ဘို့ သောက်နေရတဲ့ ဆေးတွေကနေ ဝမ်းချုပ်စေနိုင်တာကို သတိထားပါ။ အသက်ကြီးတော ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှု နည်းလာတာတဲ့ အကြောင်းတပါးဖြစ်တယ်။ အစာလဲနည်း၊ ရေ-အရည်သောက်တာလဲ နည်းနေသလား ဆန်းစစ်ပါ။
11. You'd Know If You Had Cancer ကင်ဆာဖြစ်နေရင် ကိုယ့်ဖါသာ သိမှာဘဲလို့ မထင်ပါနဲ့။
15. IBD and Stress အူလမ်းမငြိမ်ရောဂါ နဲ့ စိတ်
စိတ်ဖိအားများတာကနေ နာတာရှည်ရောဂါတွေကို ခလုပ်ဖြုတ်ပေးသလိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အူလမ်းမငြိမ်ရောဂါ ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ မသေခြာပါ။ IBD ဆိုတာ Crohn's disease ရောဂါနဲ့ Ulcerative colitis ရောဂါတွေကို ခေါ်တာ ဖြစ်တယ်။ အူသိမ်နဲ့ အူမကြီးနံရံတွေ ရောင်ရမ်းနေတယ်။ မျိုးဗီဇကလည်း ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ခုခံအားလဲ စဉ်းစားနိုင်တယ်။
16. Celiac disease (စီးလိယက်) ရောဂါဖြစ်ရင် ဗိုက်နာမှာဘဲလို့ချည်း မထင်ပါနဲ့။
Celiac disease ဆိုတာ Gluten protein (ဂလိုတင်-ပရိုတင်း) ကို လက်မခံနိုင်တဲ့ရောဂါဖြစ်တယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေက လေပွမယ်၊ ဝမ်းလျှောမယ်။ အများဆုံးက ဒါတွေဖြစ်တယ်။ ဒါလေးတင် မရသေးဘူး Anemia သွေးအားနည်းတာ၊ Osteoporosis အရိုးအားနည်းတာ၊ Depression စိတ်ဓါတ်ကျတာ၊ Growth problems ကြီးထွားမှုနှေးတာတွေကိုပါ ရှိ-မရှိစစ်ရမယ်။
Myths လို့ခေါ်တဲ့ အယူအဆအလွဲအမှားတွေ ရေးပြီးတာ မနည်းတော့ပါ။
၁။ Digestive Myths အစားအစာမှာ အထင်မှားနေတာတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/digestive-myths.html
၂။ HIV-AIDS Myths and Facts (အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ-အေအိုင်ဒီအက်စ်) အထင်မှား နဲ့ အမှန်တရား https://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/myths-and-facts-hivaids.html
၃။ Mother’s words of wisdom အမေ့စကား https://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/mothers-words-of-wisdom.html
၄။ Myths about menstrual cycle ရာသီလာခြင်း အရိုးစွဲအယူအဆများ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/myths-about-menstrual-cycle.html
၅။ Myths of Pregnancy and Postpartum မီးတွင်းကျန်းမာရေး အယူအဆအမှားများ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/myths-of-pregnancy-and-postpartum.html
၆။ Old wives' tale မိန်းမကြီးများပုံပြင် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/10/old-wives-tale.html
၇။ The Salt Myth ချိုချင်ပါလျက် ဆားတပွင့်ကဖျက် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/the-salt-myth.html
၈။ Common Cold in children ကလေးတွေ အအေးမိရင် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/common-cold-in-children.html
၉။ Coughing and Children ကလေးတွေချောင်းဆိုးရင် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/coughing-and-children.html